पोखरामा पनि होलि खेल्न प्रतिबन्ध, घर बाहिर ननिस्कन कास्की बासीलाई जिल्ला प्रशासनको अनुरोध ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/पोखरामा पनि होलि खेल्न प्रतिबन्ध, घर बाहिर ननिस्कन कास्की बासीलाई जिल्ला प्रशासनको अनुरोध !
सरकारले कोरोना भाइरसको स’ङ्क्रमण भित्रिन नदिन मुलुकमा थप सावधानी अपनाउन थालेको छ । मास्क, औषधिलगायत २२ गरेको छ । मास्क, औषधिलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था मिलाउँदै स्वास्थ्य परीक्षण र सामाजिक सचेतनालाई प्रभावकारी बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।
चीनको वुहान शहरमा देखा परेको कोरोना भाइरसको सं’क्रमणबाट बच्न सचेतना अपनाउनुपर्ने भएको तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले नेपाललाई उच्च जोखिममा राखिसकेको छ ।
यसै क्रममा कास्की प्रशासनले भीड जम्मा गरेर फागुपूर्णिमा (होली) नखेल्न सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ। बुधबार मेला, सम्मेलन, सभा, समारोह आयोजना नगर्न अनुरोध गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले बिहीबार होलीको कार्यक्रमसमेत नगर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो।
विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागी कास्की वासीलाई अत्यावश्यक काम बाहेक सरकारले बाहिर ननिस्कन आग्रह गरेको छ ।
कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलद्धारा जारी सार्वजनिक सूचनामा नेपाल विश्वभर फैलिएको नोवल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को उच्च जोखिममा रहेको तथा नेपाल सरकारले भाइरसबाट जोगिन सचेतता अपनाउन आग्रह गरेको उल्लेख गर्दै भीडभाड हुने कार्यक्रममा नजान आग्रह पनि गरिएको छ।
यसैगरि, प्रशासनले फागुपूर्णिमाको अवसरमा कसैको स्वीकृतिबेगर रङ दल्न, लोला हा’न्न, भीडभाड र हु’लहु’ज्जत गर्न, ला’गूप’दा’र्थ सेव’न गर्न पनि बन्देज लगाएको छ।
त्यस्तै विराटनगर महानगरपालिकाले भारतको सीमा क्षेत्रमा साबुन पानीले हात मिचिमिची धुने अभियान आजदेखि सञ्चालन गरेको छ । महानगरपालिकाद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सीमा क्षेत्रमा रेलबाट विभिन्न क्षेत्रबाट आएका यात्रुका लागि नोबेल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) भित्रिन नदिनका लागि सचेतनाका लागि उक्त अभियान सञ्चालन गरेको हो ।
भारतीय रेल्वेको स्थानीय कर्मचारीको समन्वयमा सचेतना तथा सर्तकता अभियान सञ्चालन गरिएको महानगरपालिकाका कार्यवाहक प्रमुख इन्दिरा कार्कीले बताउनुभयो । उहाँले सचेतनाका लागि सम्पूर्ण पूर्वतयारी गर्न १९ वटा वडाका अध्यक्ष सम्मिलित समन्वय टोली गठन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीको नेतृत्वमा गठन गरिएको टोलीमा नगरका सबै महाशाखाका प्रमुखहरु रहनुभएको छ । भाइरसको सङ्क्रमण नहोस् भन्नका लागि सर्तकता अपनाउन टोली गठन गरिएको आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी दिइयो ।
यो रोगको मुख्य लक्षणमा १००.४ डिग्री ज्वारो आउनु र छाती भारी हुनु मुख्य लक्षण रहेको नगरपालिकाको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख रमेश कार्कीले बताउनुभयो । यस रोगका लागि आवश्यक पर्ने पारासिटामोल र टिनिडाजोल औषधिको कुनै कमी नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी नगर क्षेत्रमा रहेका औषधिका थोक बिक्रेतालाई मास्कको भण्डारका अनुगमन कार्य शुरु गरिएको छ । बजारमा मास्कको कृतिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारीमा बिक्री वितरण गरेको गुनासोलाई ध्यानमा राखी बढी मूल्य लिने पसललाई कानूनी कारवाही गरिने प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले उल्लेख गर्नुभयो ।
दुर्घटना बढेपछि ड्राइभरको आँखा जाँच्न थालियो
कमेडी च्याम्पियनमा वि’वाद सिर्जना भएपछि, खबपु फेसबुक लाइभमा आएर यस्तो भनेपछि….सामाजिक संजालमा खैलाबैला !
कावासोतीमा बस दुर्घटना, नेपाली सेनाका १७ जना घाइते
पाटन अस्पतालमा जन्मिएका थिए भुटानी राजा जिग्मे